FAQS - MGJEA
မြန်မာနိုင်ငံမှ အဖိုးတန် သယံဇာတတွင်းထွက်များ
မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကဲ့သို့ နိုင်ငံကြီးများအကြားတွင် မဟာဗျူဟာမြောက်စွာ တည်ရှိနေသော အာဆီယံနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံနိုင်ငံများအတွက် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားလာနိုင်သည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် သဘာ၀ သယံဇာတများဖြင့်ပေါကြွယ်လှသည်ဖြစ်ရာ ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ ပုလဲ၊ amber နှင့် အခြား အဖိုးတန် နှင့် တန်ဖိုးသင့် ကျောက်မျက်ရတနာများ စုံလင်စွာ ထွက်ရှိရာ အမျိုးအစားပေါင်း ၁၂၀ မျှ ထွက်ရှိသည့် နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ မိုးကုတ် ဆိုသည့် သမိုင်းဝင် မြို့တစ်မြို့ကို ပတ္တမြားမြေဟု ပင် တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ မိုးကုတ်မြို့သည် ကွေ့ကောက်နေသည့် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးမှ အနောက်ဘက် မိုင် ၅၀ အကွာ တောင်ကြားတစ်နေရာတွင် တည်ရှိပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှ ပေပေါင်း ၃၈၅၀ ပေ အမြင့်တွင် တည်ရှိနေသည်။ မိုးကုတ်မြို့သည် pigeon blood ruby with blue sapphire ၊ spinel တန်ဖိုးနည်းကျောက်မျက်များ စသည်တို့ အပါအဝင် ကျောက်မျက်ရတနာများအတွက် အထင်ရှားဆုံးမြို့ ဖြစ်ပြီး ၊ ကျောက်ရိုင်းတုံးများအတွက်မူ အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။
မိုးကုတ်မြို့ ဒေသခံများအတွက် ထာပွဲ (သို့မဟုတ်) ကျောက်မျက်ဈေး ကြီးသည် နေ့တဓူ၀ဘ၀များအပေါ်တွင် လွှမ်းမိုးလှသည်။ အဆိုပါ နေ့စဉ် ကျောက်မျက်ဈေးမှာ ပတ်ဝန်းကျင်နယ်မြေများဆီ ကျောက်မျက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများကို ဆွဲဆောင်လျှက်ရှိသည်။ ကျောက်မျက် ကုန်သည် များက ကျောက်များကိုပြသခြင်း၊ စတင်ဈေးပေးခြင်း၊ ဈေးဆစ်ခြင်း ဈေးညိုခြင်း နှင့် နောက်ဆုံးတွင် အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်သွားတော့သည်။
ပတ္တမြားသည် ပန်းရောင်မှ သွေးနီရောင် ရှိသော ရတနာဖြစ်သည်။ Corundum သတ္တု အမျိုးပေါင်းများစွာ (အလူမီနီယမ် အောက်ဆိုဒ်) ပါဝင်သည်။အခြားသော ကျောက်မျက်အရည်အသွေးရှိ corandum ကို နီလာဟု ခေါ်သည်။
ပတ္တမြား သည် ရှေးအစဉ်အဆက်ကပင် (amethyst နီလာ၊ ကျောက်စိမ်း၊ နှင့် စိတန် တို့ကဲ့သို့ပင်) အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတာ တန်ဖိုးထားခံရသည့် ကျောက် မျက်ရတနာဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပတ္တမြားကို ရူဘီ (ruby) ဟုခေါ်ပြီး၊ လက်တင်ဘာသာ ရှုဘာ (ruber) (အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့် အနီရောင်) မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ပတ္တမြား၏ အရောင်မှာ chromium ဒြပ်ဝင် ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
ပတ္တမြား၏ အရည်အသွေးသည် ကာရက်အလေးချိန်နှင့်အတူ အရောင်၊ ဖြတ်တောက်ထားပုံ နှင့် ကြည်လင်မှု စသည်တို့ အပေါ်မူတည်တည်။ လက်ရာမြောက်လှသည့် ကျောက်သွေးကွက်များကြောင့် အဖိုးအတန်ဆုံး နှင့် အတောက်ပဆုံးဖြစ်နေသည့် သွေးနီရောင်ဟု ခေါ်သည့် အနီရောင် (သို့မဟုတ်) ခိုသွေးရောင် ရှိသော ပတ္တမြားဆိုလျှင် အလားတူအရည်အသွေးရှိသော အခြား ပတ္တမြားကျောက်မျက် ထက်ပင် တန်ဖိုးကြီးမားလှသည်။
ကြည်လင်ပြတ်သားနေသည့် ပတ္တမြားသည် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြစ်သည်။ သို့သော် မည်သည့် ပြစ်ချက်မျှပါဝင်မှုမရှိသောပတ္တမြားသည် ပြုပြင်ထားသည့် ကျောက်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ပတ္တမြားသည် ဇူလိုင်လဖွား များအတွက် ကံကောင်းစေသော အဆောင်ရတနာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
synthetics, simulants or substitutes စသည်တို့နှင့် ခွဲခြားရန် အတွက် အသုံးပြုကြသည်။
ဓာတု ပုံသေနည်း Al2O3
အလင်းယိုင်မှု အညွှန်းကိန်း 1.76 - 1.77
SG 3.9 - 4.1
ကြည်လင်မှု Transparent to opaque
အရည် Vitreous to adamantine
အရောင်ခွဲဖြာခြင်း မရှိ၊ သို့သော် parting ဖြစ်နိုင်သည်။
ပြုပြင်မှုမလုပ်ထားသော အရည်အသွေးမြင့်ပတ္တမြားသည် အဖိုးအလွန်ထိုက်တန်သည်။ အချို့သော ပတ္တမြားများမှာ ကြယ်သုံးထောင့် (သို့) ခြောက်ထောင့် ပြုကြသည်။ ယင်းသို့သော ပတ္တမြားတုံးများဆိုလျှင် ၎င်းကို ပေါ်လွင်စေရန်အတွက် တစ်ဖက်ပြားပုံစံများအဖြစ်ဖြတ်တောက်ပုံဖော်ကြသည်။
ကြယ်ပွင့်များသည် အလင်းရောင်တစ်နေရာတည်းမှ လာသည့်အနေအထားတွင် အမြင်သာဆုံးဖြစ်သည်။ ယင်းအနေအထားတွင် ကျောက်တစ်ခုလုံးကို လှည့်ပတ်ကြည့်သည့်အခါ ၄င်းကြယ်ပွင့်သည်လည်း ကျောက်မျက်နှာပြင်တစ်လျောက် လှည့်ပတ်ရွေ့လျားနေသည်ကို မြင်ရသည်။
ယင်းသို့ဖြစ် ခြင်းမှာ အလင်းရောင်သည် ပိုးမျှင်ကို အလင်းရိုက်ပြီး တစ်နည်းတစ်ဖုံဖြင့် အလင်းပြန်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၁၉ ၉၂ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး ပတ္တမြား အရိုင်းတုံးများ နှင့် အချောတုံးများစွာကို ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမှ အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင်းရှူ သတ္တုတွင်းဧရိယာ တစ်ဝိုက်တွင် တွေ့ရသည်။ ယင်းဒေသတွင် တွေ့ရသော ပတ္တမြားတုံးများမှာ အများအားဖြင့် စည်ဘိုင်းပုံသဏ္ဍန်ဖြစ်ပြီး၊ ခရမ်းရင့်ရောင်ရှိသည်။ အလယ်တွင် မည်းနက်သော အသံဖြင့် အပြင်ဘက်တွင် အနီရောင် အ၀န်း/အရစ် များရှိသည်။ အပူပေး ပြုပြင်လိုက်လျှင် ၎င်းတို့၏ အပြာရောင်ပါဝင်မှုပျောက်သွားပြီး အဆံမှာ အလွန်ရဲသောအနီရောင်အဖြစ် ပြောင်းသွားသည်။
အခြားသော ကျောက်များအတိုင်းပင် ပတ္တမြားတုံးများကို အရည်အသွေးအလိုက် အဆင့်ခွဲခြားရာတွင် အရောင်၊ ဖြတ်တောက်ပုံ (သွေးပုံ) ၊ ကြည်လင်တောက်ပမှု နှင့် အလေးချိန် ကာရက် ဖြင့်အဆင့်ခွဲသည်။
ပါရှင်တန် ရှိ Smithsonian's သဘာ၀သမိုင်း အမျိုးသားပြတိုက်ကြီးတွင် ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး နှင့် အကြီးဆုံး ပတ္တမြား အချို့ ရှိသည်။ ၂၃.၁ ကာရက် (၄.၆၂ ဂရမ်) ရှိ ဗမာ့ပတ္တမြား ကို စိန်ခြယ်ထားသည့် ပလက်တီနမ် လက်စွက်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် နှင့် စေတနာရှင် တစ်ဦးဖြစ်သူ Peter Buck က ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော သူ၏ဇနီး Lucia အတွက် အောင်းမေ့ခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် လှူဒါန်းထားသည်။ ၎င်းကျောက်သည် အလွန်ကြည်လင်လှသည့် တောက်ပမှုနှင့်ရောယှက်နေသည့် အနီရောင်စိမ့်၀င်နေမှုကိုဖော်ပြနေသည်။လက်ရာမြောက်ပြီး အချိုးကျနစွာ ဖြတ်တောက်သွေးထား သည့်အတွက် အနီရောင်၏ အရောင်ပြန်မှုအားမှာလည်းကောင်းလှသည်။ ယင်းကျောက်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ မိုးကုတ်ဒေသမှ ၁၉၃၀ ခုနှစ်များက တူးဖော်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပတ္တမြားသည် ကျောက်မျက်ရတနာများတွင် အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ပြီး၊ လက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ လက်ဝတ်ရတနာအမျိုးမျိုးတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုသည်ဆိုရာတွင် လက်ကောက်၊ လည်ဆွဲ၊ လက်စွပ်၊ နားကပ် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးသုံးစွဲကြသည်။ လည်ဆွဲသီးများ နှင့် လက်စွပ်များတွင် အလည်တိုင်ကျောက်အဖြစ် ထားရှိ ပြုလုပ်သကဲ့သို့ ၊ စိန် ကဲ့သို့အခြားကျောက်မျက်များ နှင့် ရောနှောပြီးလည်း ဒုတိယကျောက်မျက်အဖြစ် အသုံးပြု၀တ်ဆင်ကြသည်။ ကြယ်ပတ္တမြားကို တ၀က်ပြားပုံသဏ္ဌာန်အဖြစ် အရောင်တင် ဆင်မြန်းကြပြီး ၊ ကြည်လင်မှုရှိပါက အလွန်ပင် တန်ဖိုးကြီးနိုင်သည်။
အရွယ်အစားကြီးများသည့် ပတ္တမြားကျောက်မှာ ရှားပါးလှပြီး တန်ဖိုးလည်းကြီးလှသည်။ အနီရောင်ရင့်ရင့်ဖြင့် ကြည်လင်တောက်ပသည့် ပတ္တမြားကျောက်သည် တစ်ကာရက် ဈေးပင်လျှင် ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိနိုင်သည်။
ဖားကန့် သည် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖျားပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မန္တလေးမြို့၏ မြောက်ပိုင်း ကီလိုမီတာ ၃၅၀ အကွာရှိ ဥရုမြစ်ပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး မိုးတွင်းကာလများတွင် လပေါင်း များစွာ သွားလာခြင်းမပြုနိုင်သလို ငှက်ဖျားရောဂါကြီးစိုးသည့် ဒေသဖြစ်သည့်အတွက
က် ခက်ခဲသည့် ဒေသတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဒိုက်ကျောက်စိမ်းများ ထွက်ရှိသည့် ဒေသဖြစ်သည့် အတွက် ကျော်ကြားသည်။
ဖွဲ့စည်းမှု ဂျေဒိုက် အသေးဆုံး အမျှင်ဆစ်ခုချင်းစီ အခြေအနေထိ စပ်လျှက်တည်ရှိနေခြင်း (microcrystalline)
မျက်နှာပြင် ကြည်လင်တောက်ပခြင်း၊ တစ်ခါတရံ ချောမွတ်နေသည့် သွင်ပြင်ရှိခြင်း
ကျောက်သား ဖွဲ့စည်းပုံ ကျောက်သားအမျှင်များ စပ်လျှက်တည်ရှိနေခြင်း
အလင်းခွဲအား 1.65 - 1.68
သိပ်သည်းဆ 3.3 - 3.8
မာကျောဆင့် (Mohs) 6.5 - 7.0
မြန်မာနိုင်ငံသည် တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် ဂျေဒိုက်ကျောက်စိမ်း၏ ၇၀% နှင့်အထက်၏ ပင်မထုတ်လုပ်ရာ နေရာဖြစ်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။ ဂျေဒိုက်ကျောက်စိမ်းကို မြန်မာပြည်မြောက်ဖျား ကချင်ပြည်နယ်၊ လုံးခင်းမြို့နယ်တွင်းရှိ ကျောက်စိမ်း
လုပ်ကွက်များတွင် အဓိက တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အဆိုပါ လုပ်ကွက်များတွင် အီကွေတာမျဉ်းကြောင်း ၂၅ နှင့် ၂၆ အတွင်းရှိ ဥရုမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်လုံး ပါဝင်သည်။ ယခုလက်ရှိ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေး လုပ်ကွက်များသည် ဖားကန့်ကြီးဒေသ၊ မော်ဆယ်၊ တင်တင် နှင့် ခန်ဆီးမိုင်းများ ပါဝင်သည်။
တရုတ်ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုတွင် ကျောက်စိမ်းသည် အဓိကကျသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပြီး နိဗ္ဗာနှင့် ငရဲကို ဆက်သွယ်ပေးသော ကြားခံတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူကြသည်။ အဆိုပါ ယုံကြည်မှုသည် သမာသမတ်ကျမှုနှင့် အသိဉာဏ်ကြွယ်ဝမှု ပြယုဂ်တစ်ခုအနေဖြင့် ကျောက်စိမ်းကို သတ်မှတ်သည့် ရှေးယခင်ကတည်းက တည်ရှိလာသော ယုံကြည်မှုဖြစ်သည်။
ကျစ်လျစ်သော ဖွဲ့စည်းပုံ၊ သိပ်သည်းသော အကြမ်းခံနိုင်စွမ်းနှင့် မာကျောမှု မြင့်မားခြင်း၊ မှိန်ပျပျ အလင်းရောင်တောက်ပမှု၊ ကြည်လင်မှု၊ အသုံးခံမှု၊ အစရှိသည်တို့သည် ကျောက်စိမ်း၏ အဓိက ဂုဏ်ဒြပ်များ ဖြစ်သည်။ ကျောက်စိမ်းကို ဝတ်ဆင်သူတိုင်းသည် ခွန်အားကြီးခြင်း၊ အကြမ်းခံခြင်း အစရှိသည်တို့အတွက် အမြဲမပြတ် သတိမူမိစေမည်ဟု တရုတ်လူမျိုးတို့ကို ယုံကြည်ကြသည်။ သို့အတွက် ကျောက်စိမ်းကို ဝတ်ဆင်ခြင်းသည် အဆိုပါ တန်ဖိုးဂုဏ်ဒြပ်များအတိုင်း ပို၍ လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ အခြား ယုံကြည်မှုတစ်ခုမှာ ဝတ်ဆင်သူအတွက် မကောင်းသည့်
ကံများကို ကျောက်စိမ်းက ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းအနေဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် ကျောက်စိမ်းကို (Imperial Jade) ဂရိတ် ၇ ဆင့် တိုင်းတာဆုံးဖြတ်သည်။ ဂရိတ် A သည် တန်ဖိုး အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် လုပ်ငန်းသုံး ကျောက်စိမ်းကို (Commercial Jade) လည်း ဂရိတ် ၇ ဆင့် တိုင်းတာဆုံးဖြတ်သည်။ အရိုင်းတုံးဖြစ်စေ၊ ဖြတ်တောက်ပြီးဖြစ်စေ ဂရိတ်မြင့် လုပ်ငန်းသုံးကျောက်စိမ်း၏ တန်ဖိုးသည် အရည်အသွေးမြင့် ကျောက်စိမ်းတန်ဖိုးနီးပါ ရရှိနိုင်သည်။ တတိယအဆင့် ကျောက်စိမ်း၊ အကြမ်းသုံး ကျောက်စိမ်းကိုမူ ပန်းကန်ခွက်ယောက်၊ ပန်းပုအနေဖြင့် ထုဆစ်မွမ်းမံကြပြီး အလှဆင် ပစ္စည်း တစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။
မြိတ်မြို့သည် တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းတွင် တည်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုရှိသည်။ မြိတ်မြို့သည် သေးငယ်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလွန် အရေးကြီးသော မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဆိုင်ရာ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး ပင်လယ်နှင့် နီးကပ်စွာ တည်ရှိသည့်အတွက် သမမျှတသည့် ရာသီဥတုရှိသည်။
မြိတ်မြို့သည် ပုလဲ၊ ရာဘာ၊ ငှက်သိုက်၊ ငါးခြောက်၊ ပုဇွန်ခြောက်နှင့် ငါးပိထွက်ရှိသည့် ဒေသအဖြစ် ကျော်ကြားသည်။
ပုလဲသည် နူးညံ့သည့် အထူးသဖြင့် အတွင်းသား တည်ရှိသော ကမာကောင် သို့မဟုတ် ဝင်ကစွပ်ကောင်များမှ ထုတ်ယူရရှိသည့် ရတနာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကမာကောင်၏ အခွံကဲ့သို့ပင် ပုလဲတွင် ကယ်လစီယမ်ကာဘွန်နိတ် ဒြပ်ပေါင်းပါရှိပြီး အလွှာတစ်ခုချင်းစီပေါ် ထပ်ကာ တည်ရှိနေသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ပုလဲသည် လုံးဝန်းသော သဏ္ဍာန်ရှိပြီး ချောမွတ်နေရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း Baroque ပုလဲဟု အများက ခေါ်ကြသော ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံရှိ ပုလဲများကိုလဲ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသော ပုလဲများကို ကျောက်မျက်ရတနာအဖြစ် မှတ်ယူကြပြီး အလှအပပုံရိပ်တစ်ခုအဖြစ် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက လက်ခံလာကြပြီးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ပုလဲကို ရှားပါးသော၊ ကောင်းမွန်သော၊ နှစ်လိုဖွယ်ရှိသော၊ တန်ဖိုးကြီးမားသော ဂုဏ်ဒြပ်တစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပုလဲရတနာ၏ တန်ဖိုးကို တိုင်းတာရာတွင် အဓိကကျသော အချက်များမှာ အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ အရောင်၊ တောက်ပမှု၊ ချောမွတ်မှု၊ နှစ်လိုဖွယ်ရှိမှု၊ အရောင်အဆင်းညီညာမှု အစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။
အခြားအရည်အသွေးများ တူညီနေလျှင် ပိုကြီးသော ပုလဲသည် ပိုရှားပါးသည့်အတွက် တန်ဖိုးအရ ပိုကြီးသည်။
တောင်ပင်လယ်ဒေသတွင်းမှ ကမာကောင်သည် ဂျပန်ရေငန်ပင်လယ်ရှိ ကမာကောင်ထက် ပိုကြီးသည့်အတွက် မွေးပုလဲ ထုတ်ယူရာတွင် ပိုကြီးသော မွေးပုလဲကို ရရှိနိုင်ခြေ ပိုများသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
လုံးဝန်းသော အဝိုင်းသည် မွေးယူရန် အခက်ခဲဆုံးသော ပုလဲဖြစ်သည့်အလျောက်၊ အကယ်၍ အခြား အချက်အလက်များ တူညီခဲ့ပါက၊ အဝိုင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ကောင်းမွန်သော သစ်တော်သီးသဏ္ဍာန်၊ ဘဲဥသဏ္ဍာန်၊ အခြား ထူးခြားသော သဏ္ဍာန်ရှိသည့် မွေးပုလဲများသည်လည်း တန်ဖိုးမြင့်အဖြစ် မှတ်ယူနိုင်သည်။
ပုလဲအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ပုလဲအရွယ်အစား စံသတ်မှတ်ချက်သည် ကွဲပြားသည်။ ဂျပန်မွေးပုလဲ သည် အရွယ်အစားပုံသဏ္ဍာန် သတ်မှတ်ချက် တင်းကျပ်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စံသတ်မှတ်ချက်
သည် အပေါ်မှ အောက် အစီအစဉ်အရ လုံးဝန်းသော၊ လုံးဝန်းလုနီးသော၊ semi-baroque နှင့် baroque ဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်။
သဘာဝနှင့် မွေးပုလဲများကို အရောင်အစား စုံလင်စွာ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ နွေးထွေးမှုကိုဆောင်သည့် အဝါ၊ လိမ္မော်၊ ပန်းရောင် ပုလဲများ ရှိသကဲ့သို့ အေးမြမှုကိုဆောင်သည့် အပြာ၊ အစိမ်းနှင့် ခရမ်းရောင်
ပုလဲများကိုလဲ တွေ့ရှိရနိုင်သည်။ ပုလဲအရောင်သည် အနုမှ အရင့် အမျိုးမျိုး ထပ်မံကွဲပြားနိုင်သည်။ ပုလဲအရောင်သည် နုဖျော့သော နူးညံ့သော အရည်အသွေးရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
အထက်ပါပုံရှိ Paljoue International Inc ပိုင် ရတနာတွင် ထင်ဟပ်နေသည့် ဂျပန်မွေးပုလဲ၏ ပုံသဏ္ဍာန်အရောင်အဆင်းဖြစ်သည့် အဖြူရောင်ကို လူအများစုက ပို၍ စွဲမြင်ကြသည်။
ပုလဲအရည်အသွေးတိုင်းတာရာတွင် တောက်ပမှုသည် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အရောင်အဆင်းတောက်ပမှုသည် သဘာဝ (သို့) မွေးပုလဲ၏ အလှအပကို တိုင်းတာရာတွင် အဓိကကျသည်။အကောင်းဆုံး - တောက်ပပြီး စူးရှမှု အားကောင်းသည်။လွန်ကောင်း - တောက်ပပြီး စူးရှမူရှိသည်။
ကောင်း -တောက်ပမှုရှိပြီး စူးရှမှုအားနည်းသည်။ အစွန်းနားတွင် မှိန်နေခြင်းရှိသည်။သင့် - တောက်ပမှု အားနည်းပြီး မှိန်သည်။ညံ့ - မှိန်ပြီး ဖျော့တော့သည်။ပုလဲမျိုးခြင်း တူလျှင် တောက်ပမှု အားပိုကောင်းသည်က ပို၍ တန်ဖိုးကြီးသည်။
အထက်ဖော်ပြပါပုံတွင်းရှိ ပုလဲ တစ်လိုင်းချင်းစီ၏ ရောင်ပြန်တောက်ပမှုသည် ကွာခြားမှု နည်းပါးသည့်
အခြားသော ကျောက်မျက်ရတနာများကဲ့သို့ပင် ပုလဲအများစုသည် ပြီးပြည့်စုံခြင်း မရှိပေ။ အချို့သော ပုလဲများတွင် ခြစ်ရာကဲ့သို့သော အစင်းကြောင်းများ ရှိနေခြင်း၊ မျက်နှာပြင် တစ်ဘက်ခြမ်း ပြားနေခြင်းတွန့်ရာကဲ့သို့ ဖြစ်နေခြင်း အစရှိသည်တို့ ဖြစ်တတ်သည်။အကယ်၍ မျက်နှာပြင်အရည်အသွေး ကွာခြားမှု များပြားခြင်း၊ ဆိုးရွားခြင်းများ ရှိပါက ပုလဲ၏ အကြမ်းခံခြင်း ကို လျော့နည်းစေနိုင်သလို တန်ဖိုးကိုလည်း လျော့ကျစေသည်။ မျက်နှာပြင်အရည်အသွေး ပုံစံ ကွာခြားမှုနည်းပါးသော ပုလဲ၊ သို့မဟုတ်အပေါက်ဖောက်ခြင်း အုပ်ခြင်းတို့ဖြင့် ဖုံးကွယ်၍ရသောပြစ်ချက် အသေးလေးသာ ရှိသော ပုလဲများတွင်မူ ပုလဲ၏ မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးသည် ပုလဲ၏ လှပမှုအပေါ် တန်ဖိုးသက်ရောက်မှု နည်းပါးသည်။
မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးနှင့် အရညတို့သည် နီးကပ်သော ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အကယ်န၍ ပုလဲး၏ ဗဟိုချက်ကို မြင်နေရသည် သို့မဟုတ် ပုလဲသည် တောက်ပမှုမရှိသော ဖြူလျော်လျော် အဆင်ရှိသည်ဟုဆိုပါက အရည်ပါးသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ အဆိုပါ အချက်သည် ပုလဲး၏ အကြမ်းခံမှု အရောင်အဆင်းအတောက်ပမှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
အရည်ကောင်းသောပုလဲသည် တောက်ပမှု ပိုရှိသည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် လက်ဝတ်ရတနာ ဒီဇိုင်းဆွဲသူများအနေဖြင့် ပုလဲ အရောင်၊ သဏ္ဍာန်၊ အရွယ်အစား
အမျိုးမျိုးကို တမင်ရွေးခြယ်ရောမွှေပြီး ဒီဇိုင်းဆွဲကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ပုလဲလည်ဆွဲ၊ နားကပ် အစရှိသည့် ပုလဲလက်ဝတ်ရတနာများတွင် အရည်အသွေးအားလုံးတူညီနေမှုက ပို၍ အရေးကြီးသည်။
အရည်အသွေးအားလုံး တူညီမှုရှိသော တောင်ပုလဲဖြူကြိုး နှင့်
အရောင်အသွေးမတူညီသော်လည်း အရည်အသွေးတူညီမှုရှိသည်ဟု လက်ခံထားကြသော ရောင်စုံ ပုလဲကြိုး။
ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းသည် အကျယ်အဝန်း ၅၅၈၆ စတုရန်းမိုင်ရှိသော ချိုင့်ဝှမ်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖျားပိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တွင်းရှိ တနိုင်းမြို့နယ်တွင်တည်ရှိသည်။
ဘားမိုက်ဟု အများကခေါ်ကြသော အလွန်ရှားပါးသည့် ပယင်းမျိုးဖြစ်သည့် အနီရင့်ရောင် မြန်မာ့ ပယင်းကို တူးဖော်ရရှိရာဒေသဖြစ်သည်။ အဆိုပါပယင်းသည် အရောင်အသွေးတောက်ပမှုမြင့်မားပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံး လိုချင်မှု အများဆုံး ပယင်းမျိုးဖြစ်သည်။
ဘားမိုက်သည် အပူချိန်၊ ဖိအားမြင့်မားမှုကြောင့် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် သစ်စေးရုပ်ကြွင်းဖြစ်သည်။ သို့အတွက် ဆားကျောက်များထက် မာခြင်းမြင့်မားသော်လည်း အတွင်းပိုင်းတွင် ကွဲအက်မှုများစွာ တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ သဘာဝ ဘားမိုက်ပယင်းရုပ်ကြွင်း များသည် ဆားကျောက်များနှင့် ဂုဏ်သတ္တိဆင်တူမှုရှိသည်။ သန့်စင် အရောင်တင်ပြီးသား အဝါရောင် ပယင်းကျောက်များသည် လေ၊ အလင်းနှင့် လေထုစိုထိုင်းဆအပေါ်မူတည်ပြီးအနီရောင် သို့မဟုတ် အညိုရောင်သို့ ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။
Fine Jewelry, Can be exported to abroad?
Yes, Government official released by 3.9.2018 that fine jewelry can be exported to foreign countries accordance to government’s policy.
Now, gold, gold jewelry and accessories with gold can be traded via air and sea routes as well as across the border.
အသင်းသား၏ အခွင့်အရေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-
(က) အသင်းသားတစ်ဦးသည်အသင်း၏ အလုပ်အမှုဆောင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ နှင့် အသင်းသားများ ၏ မဲအဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ရယူရမည့် ကိစ္စရပ်များတွင် မဲပေးခွင့်ရှိသည်။
(ခ) အသင်း၏သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဂ) အသင်းကစီစဉ်သော ဖွင့်လှစ်သည့်သင်တန်းများတွင် သက်သာသောနှုန်းထားဖြင့် တက်ရောက် ခွင့်ရှိသည်။
(ဃ) အသင်းဝင် ကုမ္မဏီများသာ ပါဝင်ပြသရောင်းချခွင့်ရှိသော နိုင်ငံတကာကျောက်မျက်ရတနာ ပြပွဲများ တွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။
( င ) ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်း၏ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ပ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ နှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ